I-Sprout Social: Khulisa Ukusebenzelana Kwezokuxhumana Ngaleli Platform Yokushicilela, Ukulalela, kanye Nokumela
NgoMsombuluko, Ephreli 25, 2022 NgoMsombuluko, Ephreli 25, 2022 Douglas Karr
Wake walandela inkampani enkulu eku-inthanethi ukuze uphoxeke ngekhwalithi yokuqukethwe eyabelana ngakho noma ukuntuleka kokusebenzelana enakho nezithameli zayo? Kuwuphawu olutshelayo, isibonelo, ukubona inkampani enamashumi ezinkulungwane zabasebenzi kanye namasheya ambalwa nje noma ukuthanda kokuqukethwe kwayo. Kuwubufakazi bokuthi abalaleli noma bayaziqhenya ngempela ngokuqukethwe abakukhuthazayo. Amagiya ezinkundla zokuxhumana
I-Movavi: I-Suite Yokuhlela Ividiyo Yamabhizinisi Amancane Ukukhiqiza Amavidiyo Angochwepheshe
ULwesithathu, April 20, 2022 NgoMsombuluko, Ephreli 25, 2022 Douglas Karr
Uma ungakaze ube nethuba lokuhlela ividiyo, uvamise ukuba semgwaqeni wokufunda. Kukhona isofthiwe eyisisekelo yokusika, ukusika, nokwengeza izinguquko ngaphambi kokulayisha ividiyo yakho ku-YouTube noma isayithi yenkundla yezokuxhumana... bese kuba nezinkundla zebhizinisi ezakhelwe okuhlanganisa ukugqwayiza, imiphumela emangalisayo, kanye nokubhekana namavidiyo amade kakhulu. Ngenxa yomkhawulokudonsa nezidingo zekhompuyutha, ukuhlela ividiyo kuseyinqubo eyenziwa kakhulu endaweni ngedeskithophu.
Lapho Unga-oda Ukupakishwa Okuzinzile Kwe-Eco-Friendly, Okusimeme Kwemikhiqizo Yakho Ye-Ecommerce
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 15, i-2022 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 15, i-2022 Douglas Karr
Akuvamile ukuthi kuphele isonto ngingatholi uhlobo oluthile lokudiliva ekhaya lami. Nginempilo ematasa kakhulu ngakho-ke kulula kakhulu ukuthola ukulethwa kwe-Amazon Key kwezinto noma igrosa ngaphakathi kwegaraji lami kunzima kakhulu ukudlula. Sengikushilo lokho, ngiyalazi iqiniso lokuthi kunokumosha okuningi okuhambisana nemikhuba yami. Inothi elilodwa elithokozisayo elokuthi ngenkathi kukhethwa umgqomo wami wokugaywa kabusha